Rudo Rwusingaperi Rwunotaurwa muRwiyo rwaSoromoni | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Kupisa [kwerudo] kupisa kwomoto, iwo murazvo waJah.”—RWIYO 8:6.
Nei murume nomukadzi vachikwanisa kuva nerudo rwechokwadi?
VaKristu vakaroorana vangadzidzei muRwiyo rwaSoromoni?
VaKristu vasati vava muwanano vangadzidzei muRwiyo rwaSoromoni panyaya yokudanana uye yokusarudza wokuroorana naye?
1, 2. Ndivanaani vanogona kubatsirwa kana vakanyatsodzidza Rwiyo rwaSoromoni uye nei tichidaro? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
VAVIRI vachangobva kuchata vanotarisana mumaziso votanga kunyemwerera. Ndiani angaramba kuti paita zverudo? Hama yapa hurukuro yemuchato wavo inotarisa vaviri ava vachitamba zvinyoro-nyoro, yotanga kufunga kuti: ‘Rudo rwevaviri ava rucharamba ruripo here kana kuti ruchapera nokupindana kwemakore?’ Kana murume nomudzimai vachinyatsodanana, vanokwanisa kutsungirira kunyange matambudziko akaoma zvikuru. Asi zvinosuwisa kuti mazuva ano vakawanda vakaroorana vanopedzisira vasisafari vozoguma varambana. Saka mubvunzo unovapo ndewokuti: ‘Zvinoita here kuti vanhu vave nerudo rwusingaperi?’
2 Mumazuva aMambo Soromoni, zvaivawo zvisiri nyore kuti vanhu vave nerudo rwechokwadi. Achitaura nezvevanhu vemumazuva ake, Soromoni akanyora kuti: “Ndakawana murume mumwe chete [akarurama] pane vane chiuru, asi handina kuwana mukadzi pane vose ava. Onai! Ndakangowana izvi chete, kuti Mwari wechokwadi akaita vanhu vakarurama, asi ivo vakatsvaka mazano mazhinji.” (Mup. 7:26-29) Panguva iyi, vaIsraeri vakawanda vakanga vava kuita unzenza vachitevedzera vakadzi vavaigara navo vokune dzimwe nyika avo vainamata Bhaari. Saka, zvaiva zvakaoma zvikuru kuti Soromoni awane kunyange murume kana kuti mukadzi mumwe chete aiva netsika dzakanaka. * Kunyange zvakadaro, rwiyo rwakanga rwanyorwa naSoromoni makore 20 akanga adarika rwunoratidza kuti murume nomukadzi vanokwanisa kuva nerudo rwusingaperi. Rwiyo urwu rwunoratidzawo kuti rudo rwusingaperi rwakaita sei uye kuti rwunoratidzwa sei. Vashumiri vaJehovha vose, vari muwanano nevasiri, vanogona kudzidza zvakawanda nezverudo urwu kana vakanyatsoongorora bhuku iri reBhaibheri rinonzi Rwiyo rwaSoromoni.
ZVINOBVIRA KUVA NERUDO RWECHOKWADI!
3. Nei murume nomukadzi vachikwanisa kuva nerudo rwechokwadi?
3 Verenga Rwiyo rwaSoromoni 8:6. Mashoko okuti “murazvo waJah” akashandiswa mundima iyi, anotiudza zvakawanda nezverudo. Rudo rwechokwadi runonzi “murazvo waJah” pakuti Jehovha ndiye akaita kuti rudo irworwo rwuvepo. Akasika munhu nomufananidzo wake, saka vanhu vose vanokwanisa kuva nerudo. (Gen. 1:26, 27) Mwari paakapa Adhamu mudzimai, Adhamu akafara chaizvo zvokuti akadetemba. Hapana mubvunzo kuti Evha ainzwa ari pedyo zvikuru nemurume wake nokuti ainge ‘atorwa’ kubva paari. (Gen. 2:21-23) Sezvo Jehovha akasika munhu nenzira inoita kuti akwanise kuva nerudo, zvinobvira kuti murume nomukadzi vave nerudo rwusingaperi.
4, 5. Tsanangura muchidimbu nyaya inotaurwa muRwiyo rwaSoromoni.
4 Rwiyo rwaSoromoni rwunotsanangura zvinonakidza rudo rwunogona kuva pakati pomunhurume nomunhukadzi. Rwiyo urwu rwunotaura nezvekudanana kwemumwe mukomana aiva mufudzi nemusikana aibva kuShunemi kana kuti Shuremi. Pane imwe nguva, musikana uyu ainge akarinda minda yemizambiringa uye Soromoni akanga akadzika musasa pedyo nemunda uyu. Soromoni akabva atorwa mwoyo nerunako rwemusikana uyu zvokuti akamutora akamupinza mumusasa wake. Asi kubvira pakutanga, zvaiva pachena kuti musikana uyu anoda mukomana wake. Soromoni paanomupfimba, musikana wacho anonyatsotaura kuti ari kusuwa mudiwa wake. (Rwiyo 1:4-14) Mufudzi wacho paanozokwanisa kupinda mumusasa waSoromoni uye paanoonana nemudiwa wake, vanoudzana mashoko erudo.—Rwiyo 1:15-17.
5 Soromoni paanodzokera kuJerusarema, anotora musikana uya oenda naye asi mufudzi anotevera musikana wake. (Rwiyo 4:1-5, 8, 9) Soromoni anoedza aedzazve kupfimba musikana uyu asi zvinoramba. (Rwiyo 6:4-7; 7:1-10) Pakupedzisira mambo anozomubvumira kuti adzokere kumba. Rwiyo rwacho rwunopera musikana achidana mudiwa wake kuti amhanye ‘semhara’ achiuya kwaari.—Rwiyo 8:14.
6. Nei zvisiri nyore kuziva vanhu vanenge vachitaura muRwiyo rwaSoromoni?
6 Rwiyo rwaSoromoni rwunonakidza zvokuti rwunotonzi “rwiyo rwakanaka kukunda dzimwe dzose.” (Rwiyo 1:1) Asi hazvisi nyore kuti munhu anenge achiverenga bhuku iri azive kuti ndiani ari kutaura nokuti Soromoni haana kududza mazita evanhu vacho. Bhuku rinonzi The New Interpreter’s Dictionary of the Bible rinoti, ‘maitikiro akaita zvinhu kana tsanangudzo yetwose twakaitika nemazita evanhu handizvo zvinonyanyokosha.’ Soromoni angangodaro akasiya mazita evanhu vaitaura nemhaka yokuti aida kuti pasava nechinovhiringidza kunaka kwerwiyo urwu. Kunyange zvakadaro, tinogona kuziva kuti ndiani ari kutaura kana tikaongorora mashoko anotaurwa nevanhu vari munyaya yacho.
“KURATIDZA KWAKO RUDO KURI NANI KUPFUURA WAINI”
7, 8. Tingati chii nezvemashoko ‘okuratidza rudo’ ari muRwiyo rwaSoromoni? Taura mienzaniso.
7 Musikana wokuShunemi nemufudzi wake vane mashoko akawanda ‘okuratidza rudo’ avaiudzana. Tingatadza kunyatsonzwisisa mashoko avaiudzana nokuti akanyorwa makore anenge 3 000 akapfuura uye tsika dzevanhu vepanguva iyoyo dzainge dzakasiyana nedzedu, asi tinokwanisa kuona kuti vaviri ava vaidanana zvakadini. Somuenzaniso, mufudzi akaudza musikana wake kuti aiva nemaziso akanaka sezvakaita “enjiva,” nokuti maziso ake airatidza kuti munhu ane mwoyo wakanaka. (Rwiyo 1:15) Musikana haana kufananidza maziso emukomana wake nemaziso enjiva, asi akaafananidza ‘nenjiva’ dzacho. (Verenga Rwiyo rwaSoromoni 5:12.) Musikana uyu paaitarisa mboni yeziso romukomana wake iyo yakapoteredzwa nechichena, aiona yakamunakira senjiva iri kugeza mumukaka.
8 Mufudzi nomusikana wake vaiudzana nezverunako rwavaiva narwo asi havana kugumira ipapo. Somuenzaniso, mufudzi akataurawo kuti aifarira matauriro aiita musikana wake nevamwe vanhu. (Verenga Rwiyo rwaSoromoni 4:7, 11.) Akati miromo yake “inoramba ichidonha uchi hwomumazinga.” Nei akataura kudaro? Nokuti uchi hwomumazinga hunotapira zvakanyanya kupfuura huya hunenge hwamborohwa nemhepo. Akatiwo, “Uchi nomukaka zviri pasi porurimi” rwake, achireva kuti mashoko aitaurwa nemusikana wake aifadza uye aiva akanaka. Saka zviri pachena kuti mufudzi paakaudza musikana wake kuti “wakanaka, . . . uye hapana pawakaremara,” ainge asingangotauri nezverunako rwekunze chete.
9. (a) Murume nomudzimai vanofanira kuva nerudo rwakaita sei? (b) Nei zvakakosha kuti vakaroorana vaudzane mashoko erudo?
9 Murume nomudzimai vanoshumira Jehovha havaoni muchato sechibvumiranowo zvacho chokuti vangogara vose asi pasina rudo. Rudo runotofanira kunge ruri chinhu chikuru mumba mavo. Asi rudo rwacho runofanira kunge rwakaita sei? Nderwuya here rwunotungamirirwa nemafungiro aMwari ari muBhaibheri rwatinonzi tiratidze munhu wose? (1 Joh. 4:8) Ndirwo here rwuya rwunowanikwa muvanhu vomumhuri imwe chete? Ndirwo here rwatinowana pakati peshamwari? (Joh. 11:3) Nderwuya here rwunowanika pakati pevanhu vaviri vanodanana? (Zvir. 5:15-20) Chokwadi ndechokuti rudo rwomurume nomudzimai runofanira kuva nezvose izvi. Vanofanira kuratidza nemashoko nezviito kuti vanodanana. Zvakakosha zvikuru kuti vakaroorana varege kubatikana zvokuti vanoshaya nguva yokuudzana mashoko erudo! Kuudzana mashoko iwayo kunoita kuti mumba muve nemufaro uye mumwe nemumwe anzwe akachengeteka achiziva kuti anodiwa. Kune dzimwe nzvimbo, vanhu vanoita zvokutsvakirwa vokuroorana navo zvichiita kuti vasvike pakuroorana vasinganyatsozivani. Kunyange zvakadaro, kana vakaziva kuti zvinokosha kugara vachiudzana mashoko erudo, rudo rwavo rwuchasimba zvoita kuti imba yavo isimbe.
10. Chii chinoitika kana murume nomudzimai vakagara vachifunga nezverudo rwavanoratidzana?
10 Kuudzana mashoko erudo muwanano kune zvimwe zvakwakanakira. Mambo Soromoni akaudza musikana wokuShunemi kuti aida kumugadzirira “zvishongo zvendarama zvakaita raundi, pamwe chete nezvuma zvesirivha.” Akamurumbidza zvakanyanya achiti aiva “akanaka sejenaguru, akachena sezuva rinopenya.” (Rwiyo 1:9-11; 6:10) Asi musikana uyu akaramba akaperera kumukomana wake. Chii chaimusimbisa nokumunyaradza panguva yaainge akaparadzana nemudiwa wake? (Verenga Rwiyo rwaSoromoni 1:2, 3.) Airamba achifunga nezvemashoko nezviito zvemukomana wake zvairatidza kuti anomuda. Kuratidzwa rudo kwaaiitwa kwaiva “nani kupfuura waini” inoita kuti mwoyo womunhu ufare, uye zita romukomana wake raimunyevenutsa “semafuta anodururwa” mumusoro. (Pis. 23:5; 104:15) Saka zvinokosha chaizvo kuti murume nomudzimai vagare vachiratidzana rudo. Kuyeuka mashoko erudo avanoudzana kuchabatsira kuti imba yavo isimbe.
MUSAEDZA KUMUTSA RUDO “KUSVIKIRA RWAVA KUDA”
11. VaKristu vasati vava muwanano vangadzidzei pamashoko akataurwa nemusikana wokuShunemi kuvanasikana veJerusarema?
11 Vashumiri vaMwari vasati vava muwanano, kunyanya vaya vari kutsvaka wokuroorana naye, vanodzidzawo zvakawanda muRwiyo rwaSoromoni. Musikana wokuShunemi haana kumbobvira ada Soromoni. Saka akaita kuti vanasikana veJerusarema vapike achiti: “Musaedza kupfutidza kana kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.” (Rwiyo 2:7; 3:5) Nei akaita izvi? Nokuti hazvina kunaka kuti munhu ade munhu wese wese anenge amupfimba. Saka kuchenjera kuti muKristu anenge achitsvaka munhu wokuroorana naye amirire kusvikira awana munhu waanonyatsoda.
12. Nei musikana wokuShunemi aida mufudzi?
12 Nei musikana wokuShunemi aida mufudzi? Ichokwadi kuti mukomana uyu aiva akanaka ‘semhara’; maoko ake aiva akasimba ‘sepombi dzendarama’; uye makumbo ake aiva akanaka uye akasimba ‘sembiru dzemabhura.’ Asi chimiro chomukomana uyu handicho chainyanya kukosha. Musikana uyu akataura nezvemukomana wake achiti: “Sezvakaita muti womuapuro uri pakati pemiti yomusango ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pevamwe vanakomana.” Kuti musikana uyu akanga akatendeka kuna Jehovha azotaura mashoko aya nezvemukomana wake, mukomana wacho anofanira kunge aida Mwari chaizvo.—Rwiyo 2:3, 9; 5:14, 15.
13. Nei mufudzi aida musikana wake?
13 Musikana wacho aivawo munhu akaita sei? Kunyange zvazvo aiva tsvarakadenga zvokuti airwarirwa namambo uyo panguva iyoyo aiva “navanamambokadzi makumi matanhatu nevarongo makumi masere uye vasikana vasingaverengeki,” musikana uyu aizviona ‘seruvawo zvaro resafuroni romubani.’ Izvi zvinoratidza kuti aizvininipisa chaizvo. Ndokusaka mukomana wake aimukoshesa chaizvo zvokuti aimuona ‘seruva riri pakati poutumbambeva.’ Musikana uyu ainge akatendeka kuna Jehovha.—Rwiyo 2:1, 2; 6:8.
14. VaKristu vari kutsvaka wokuroorana naye vangadzidzei muRwiyo rwaSoromoni?
14 Magwaro anoti vaKristu vanofanira kuroora kana kuroorwa “munaShe chete.” (1 VaK. 7:39) MuKristu anenge achitsvaka wokuroorana naye haafaniri kudanana nemunhu asingatendi. Anofanira kutsvaka wokuroorana naye pakati pevashumiri vaJehovha vakavimbika chete. Izvi zvakakosha nemhaka yokuti vakaroorana vanotarisana nematambudziko zuva nezuva saka kuti vave nerugare uye varambe vakabatana, zvinotoda kuti vave nekutenda uye vazvipire kuna Mwari. Uhwu ndihwo unhu hwaunofanira kutsvaka pamunhu waunenge uchida kuroorana naye uye ndihwo hwaivawo nemufudzi nemusikana wake.
VaKristu havafaniri kudanana nevanhu vasiri vashumiri vaJehovha (Ona ndima 14)
MWENGA WANGU WAKAITA ‘SEMUNDA WAKAKOMBEREDZWA’
15. VaKristu vasati varoora kana kuroorwa vangadzidzei pane zvakaitwa nemusikana wokuShunemi?
15 Verenga Rwiyo rwaSoromoni 4:12. Nei mufudzi akafananidza mudiwa wake ‘nemunda wakakomberedzwa’? Munda wakakomberedzwa haungopindwi nemunhu wese wese. Kana munhu achida kupindamo anotofanira kupfuura nepagedhi rakakiyiwa. Musikana wokuShunemi akafananidzwa nemunda wakadaro nokuti mwoyo wake wainge wakaperera kumukomana wake aiva mufudzi. Kuramba kwaakaita kunyengetedzwa namambo kwakaratidza kuti aiva akaita ‘serusvingo’ kwete ‘sesuo’ rinongopindwa nemunhu wese wese. (Rwiyo 8:8-10) Saizvozvowo, mukomana nemusikana vanenge vachidanana havafaniri kudazve mumwe munhu kunze kweuya wavanoda kuroorana naye.
16. Vaya vanenge vachidanana vangadzidzei muRwiyo rwaSoromoni?
16 Rimwe zuva muchirimo, mufudzi akakumbira musikana wake kuti vambobuda vachifurwa nemhepo asi hanzvadzi dzake dzakamurambidza. Dzakabva dzapa musikana wacho basa rokurinda minda yemizambiringa. Nei dzakadaro? Dzainge dzisingavimbi naye here? Kuti dzingava dzaifunga kuti aida kuita unzenza? Kwete, dzaitomudzivirira kuti asapinda mumamiriro ezvinhu aizomuisa pamuedzo. (Rwiyo 1:6; 2:10-15) VaKristu vasati vava muwanano vangadzidzei? Pavanenge vachidanana, vanofanira kutora matanho anovabatsira kuti varambe vakachena. Musaende munzvimbo dzamusingaonekwi nevamwe vanhu. Kunyange zvazvo zvisina kuipa kuita zvinhu zvinoratidza kuti unoda mumwe wako, ngwarirai kuti musazvipinze mumuedzo.
17, 18. Wabatsirwa sei nokuongorora Rwiyo rwaSoromoni?
17 VaKristu vakawanda pavanoroorana, rudo rwavo runenge ruchibvira semoto. Jehovha ndiye akatanga urongwa hwewanano uye anoda kuti igare nokusingaperi, saka murume nomudzimai vanotofanira kuramba vachikuchidzira rudo rwavo kuti rwurambe rwuchibvira.—Mako 10:6-9.
18 Paunenge uchitsvaka wokuroorana naye, unofanira kutsvaka munhu waunonyatsoda uye kana wamuwana, shandai pamwe chete kuti rudo irworwo rwurambe rwakasimba uye rwuchipfuta semoto sezvataona muRwiyo rwaSoromoni. Ungava uri kutsvaka wokuroorana naye kana kuti watova muwanano, dai mukava nerudo rwechokwadi, iwo “murazvo waJah.”—Rwiyo 8:6.
^ ndima 2 Ona Nharireyomurindi, yaJanuary 15, 2007, peji 31.